Tokony hisy ve ny endrika amin’ny fiteny Shona amin’ny Google sy tranonkala media sosialy? Eny hoy ity Zimbaboeana mpahay teknolojia ity · Global Voices teny Malagasy
Mitarika fikarohana fianarana amin'ny milina ny fiteny Shona i Kudzaishe Sibanda
Voadika ny 17 Avrily 2021 4:04 GMT
Mpandihy sy mpitendry amponga nentim-paharazana ao Zimbaboe. Sary avy amin'i TJ Maposhere tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka amin'ny 13-19 aprily 2021, handray ny kaonty Twitter ifandimbiasana @DigiAfricanLang i Blessing Sibanda, izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana ireo fiteny Afrikana. Vakio bebe kokoa ato ny momba ny fanentanana.
Shona, fiteny ofisialin'i Zimbaboe, dia iray amin'ny fiteny Bantu be mpiteny indrindra, manana mpiteny tombanana eo amin'ny 10,8 tapitrisa eo. Saingy na dia misy aza ireo loharanom-pahalalana literatiora sy ara-tantara marobe napetraka amin'ny Shona, tsy dia mahafa-po mihitsy ny fahitana ny fiteny an-tserasera.
Blessing Sibanda, injenieran'ny rindrambaiko, no lohalaharana amin'ny ezaka hananana ny teny Shona ho ankatoavina eo amin'ny sehatry ny fikirakirana ny fiteny voajanahary, ny sehatry ny faharanitan-tsaina artifisialy mba hahatonga ny solosaina “hahatakatra” sy hamaky ny fiteny voasoratra sy tenenina.
Niresaka tamin'i Blessing i Adéṣinà Ọmọ Yoòbá avy ao amin'ny Rising Voices mba hahalalana bebe kokoa momba ny asany amin'ny fahazoana fankatoavana ny fiteny Shona amin'ny milina fianarana tokotanin-tsehatra sy an-jotra.
Adéṣinà Ọmọ Yoòbá (AOY): Azonao atao ve ny milaza aminay ny momba anao?
Blessing Kudzaishe Sibanda. Image used with his permission.
Blessing Kudzaishe Sibanda (BKS): Blessing Kudzaishe Sibanda no anarako. Injenieran'ny rindrambaiko sy mpikaroka aho. Manaraka fianarana mari-pahaizana Master momba ny Siansa Informatika ao amin'ny Oniversite Siansa sy ny Teknolojia Namibia aho izao. Ny tanjoko amin'ny fikarohana dia ny Fahitana momba ny Solosaina sy ny fanodinana ny teny voajanahary (NLP).
Izaho dia anisan'ny Masakhane, izay itarihako fikarohana NLP momba ireo fiteny vitsy voambolana, mifantoka manokana amin'ny tenindrazako Shona. Nandray anjara manokana tamin'ny fandikan-teny amin'ny milina sy ny fisantarana andraikitra fankatoavana singa nomena anarana (NER-ang) ho an'ny Shona aho.
AOY: Manao ahoana ny toerana ankehitriny misy ny fiteninao ivelan'ny aterineto sy an-jotra?
BKS: Mavitrika tokoa ary mavitrika ivelan'ny aterineto ny Shona. Araka ny tranokala mustgo, iray amin'ireo fiteny Bantu be mpiteny indrindra izy io, ary tombanana ho 10,7 tapitrisa ny mpampiasa azy. Manana tantara sy literatiora manan-karena fanadihadiana maromaro izy. Na dia manana loharano lehibe ivelan'ny aterineto aza izy, dia mbola betsaka ny azo atao hampitomboana ny fisiany amin'ny aterineto.
AOY: Inona araka ny hevitrao no fanamby lehibe atrehin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiteninao amin'ny resaka fifandraisana nomerika na famoronana votoaty nomerika amin'ny tenin-drazan'izy ireo?
BKS: Heveriko fa any amin'ny ankamaroan'ny firenena Afrikana, anisan'izany ny fireneko, ny fanamby lehibe indrindra dia ny fananana ny fitenin'ireo mpanjanatany taloha ho fiteny voalohany. Na dia tombontsoa aza ity rehefa nifampiresaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia nahatonga ny tenindrazanay tsy nankatoavina araka ny tokony ho izy. Nahatonga ny fiheverena ireo izay miteny Anglisy ho toy ny avara-pianarana kokoa na sarangam-piarahamonina ambonimbony kokoa izany no sady manambany ny fitenin-drazanay manokana. Ka noho izany, mahita ianao fa mora kokoa ny miteny vahiny toy izay ny anao teratany.
Amin'izany, heveriko fa ny olana lehibe indrindra tokony hovahana dia ny fomba fijery ny tenin-drazana, mila ovaina izany mba hahatonga azy ho mahasarika kokoa ny fampiasana azy na amin'ny varotra na amin'ny aterineto, mba hahafahan'ny olona mandray azy tsara kokoa. Raha ny fomba fijery ara-teknolojia, dia taraiky izy amin'ny lafiny fitaovana sy rindrambaiko izay manamora kokoa azy sy azo idirana hampiasaina anjotra. Ny ankamaroany dia noho ny tsy fahampian'ny loharano azo ampiasaina hamokarana ireo fitaovana ireo. Hisy vokatsoa maharitra ireo fitaovana sy servisy toy ny rakibolana, fandikan-teny, kitendry (ho an'ireo fiteny misy diakritika), ny kabary, ankoatra ny hafa, satria manamora ny fifandraisana amin'ny fiteninay manokana amin'ny aterineto izy ireo.
AOY: Araka ny hevitrao, inona ny sasany amin'ireo dingana azo raisina ao anatin'ny fotoana fohy handrisihana ny fitomboan'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto?
BKS: Mino aho fa ny fampiatiana ireo fiteny eo an-toerana ao anatin'ny fitaovana sy teknolojia an-tserasera isan'andro izay ampiasainay dia afaka mandrisika ny fitomboan'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto. Ohatra, amin'ny Fikarohana Google, raha azonao atao ny mamadika ny fiteny lehibe ho Shona ary azo aseho amin'ny Shona ny zava-drehetra. Tokony ho io ihany koa no safidy ho an'ireo tranonkala media sosialy, izay tsy ananan'ny fiteny avy aty Afrika fisehoan'ny fiteniny manokana.
Ohatra iray hafa ny amin'ny Wikipedia. Afaka mandray anjara amin'ny fampiasana ny fitenin-drazany ny olona izay mampitombo ny fahitana ireo fiteny ireo. Mino aho, araka ny efa nomarihiko teo aloha, fa dingana iray hafa, ny fampiasam-bola amin'ny fikarohana sy ny vokatra izay mampiasa ny tenin-teratany.
Raha ny fijery teknolojika, dia betsaka ny tany mila sahanina raha oharina amin'ireo fiteny be mpampiasa indrindra raha te ho ao anatin'ny voambolam-pikarohana sy vokatra. Sakana izany satria tsy afaka maneho feno ny fiteninay izahay no manao izay hahatakaran'ny tsy zatra azy, satria nanao izao tontolo izao ho vohitra iray manerantany ny aterineto. Amin'ireto ezaka ifarimbonana ireto, mino aho fa azo ampirisihina ny fampiasana ny tenindrazana an-tserasera.
AOY: Inona no antony manosika anao voalohany hiasa hahita ny fiteninao sy ny kolontsaina ho hita amin'ny aterineto?
BKS: Ny antony manosika ahy dia ny mahita hetsika marobe rehefa miresaka momba ny teknolojia NLP ho an'ny teny Shona, ary ny fananana fitaovana azo ampitahaina amin'ny fampisehoana ireo fiteny ampiasaina indrindra amin'ny aterineto. Mino aho fa handrisika ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto ny fitaovana mahavita izany, ary mba hitrangan'izany dia tokony ho lohalaharana amin'ny fikarohana sy famokarana ireo fitaovana ireo ny mpiteny teratany satria mahatakatra tsara kokoa ny fiteniny manokana izy ireo.
Izany no antony ankafiziko sy anisan'ny maha-fiarahamonina Masakhane ahy. Mitondra ireo mpiteny teratany hiasa sy hikaroka momba ny fitenin'izy ireo manokana izany. Mampihena ny sakana hidirana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo teknolojia ireo, manome vondrom-piarahamonina sy mpanolo-tsaina hanampy mandritra ny dia amin'ny famokarana ireo fitaovana ireo. Ho fanampin'izany, dia mamoaka fikarohana izay hanamora ny fanohizan'ny hafa ity asa ity izany ary hahazoana antoka fa voasolotena amin'ny teknolojia ny tenin-teratany.